सांसदलाई सरकारी अस्पताल नै प्यारो « Loktantrapost
सांसदलाई सरकारी अस्पताल नै प्यारो
१८ फाल्गुन २०७२, मंगलवार १३:२३
भद्रपुर, १८ फागुन । हल्दीवारी–७ का मोहन टुडु एमाओबादीबाट प्रतिनिधित्व गर्ने झापाका एक मात्र सांसद् हुन् । पूर्व लडाकु कमाण्डर टुडु राजनीतिक कारणले सबैका लागि परिचित छन् । ‘पावर’का हिसावले उनी कमजोर छँदैछैनन् । उनले फोन घुमाए भने जुनसुकै सुविधा सम्पन्न हस्पिटलले पनि ‘हाम्रोमा आउनुस् माननीयज्यू, जे परेको खर्च छुट गरिदिउला’ भनिदिन सक्छन् । तर आइतवार आफ्नी पत्नी सन्तुमायालाई प्रसुति व्यथा लाग्दा उनले उपचारका लागि थुप्रै सुविधा सम्पन्न भनिएका निजी हस्पिटल होइन, सरकारी स्वामित्वको मेची अञ्चल अस्पताल नै रोजे ।
सादा जीवन शैली अपनाउने सांसद् टुडुकी पत्नी सन्तुमायालाई आइतवार विहानै व्यथाले च्यापेको थियो । रेडव्रmसको एम्वुलेन्स मगाएर उनले तुरुन्त अस्पताल पुर्याउन भने । एम्बुलेन्सका चालकले विर्तामोड र भद्रपुरको कुनै निजी हस्पिटल लैजाने होला भन्ठाने । तर सांसद् टुडुले चालकलाई भने–‘तपाई हामीलाई सरासर मेची अञ्चल अस्पताल पुर्याउनुहोस् ।’
विहान ६ः५० बजे सांसद् पत्नीले नर्मल डेलिभरिबाटै मेची अञ्चल अस्पतालमा छोरो जन्माइन् । ‘मेटर्निटी वार्ड’को ८९ नं.को सामान्य वेडमा भर्ना भएकी सन्तुमाया र उनको नवजात शिशुको स्वास्थ्य अवस्था अत्यन्त राम्रो छ ।
लोकतन्त्रकर्मी अस्पताल पुग्दा सांसद् टुडु दोकानबाट दवाई किनेर ल्याउँदै थिए । वेड वरिपरि परिवारका अन्य सदस्य हेरचाहका लागि जुटेका थिए । सुत्केरी सन्तुमाया र सांसद् टुडु दुबै प्रसन्न थिए ।
‘सरकारी अस्पतालमै आउनु भएछ नि ?’ जिज्ञासा राख्दा सांसद् टुडुले भने–‘आम नागरिकलाई सरकारी अस्पतालमा जाउ भन्ने, अनि नेताहरू चाहिँ निजी नर्सिङ होम खोज्दै हिड्ने प्रबृत्ति त राम्रो होइन नि ।’
आम नागरिकले जस्तो सेवा पाइरहेका छन्, आफुले पनि त्यस्तै सेवा लिन चाहेको उल्लेख गर्दै सांसद् टुडुले मेची अञ्चल अस्पतालको सेवाको गुणस्तरप्रति आफु विश्वस्त रहेको बताए ।
मेची अञ्चल अस्पतालमा विशेषज्ञ डाक्टरहरूको सङ्ख्या उल्लेख्य रहेको र त्यहाँको उपचारमा प्रयोग भइरहेको प्रविधि एवम् प्रयोगशाला अन्य नर्सिङ होमभन्दा कम नभएको सांसद् टुडु बताउँछन् ।
अस्पतालकी स्टाफ नर्स स्मृति पाण्डेले प्रसुति उपचारका लागि अस्पतालमा भर्ना भएकी सन्तुमाया सांसद्को पत्नी भन्ने सुरुमा थाहा भएको बताइन् । ‘उहाँ (सांसद)मा पदीय कुनै अहङ्कार थिएन’, उनले भनिन्–‘सांसद् मन्त्री जस्ता उच्च ओहोदाका व्यक्तिले उपचारका लागि सरकारी अस्पताल आइदिँदा हामी कर्मचारीको मनोवल बढ्छ ।’
सन्तुमायाको नर्मल प्रसुति गराएकी अनमी मन्दिरा निरौलाले अस्पतालबाट कहिल्यै पनि ठूलो र सानो ओहोदाको भनेर विभेद नहुने बताइन् । ‘उहाँहरू (सांसद् परिवार) आउनुभयो, हामीले अरुलाई जसरी नै राम्रो सेवा प्रदान गर्यौँ’, अनमी निरौला भन्छिन्–‘डाक्टरहरू आउनु भएपछि मात्र उहाँहरू सांसद् भन्ने थाहा भयो ।’
उपचार गराउनु पर्दा जोकोही पनि ‘पैसा धेरै लागे लागोस्, तर उपचार राम्रो होस्’ भन्ठान्छन् । धेरैलाई निजी नर्सिङ होम मात्र उपचारका लागि भरपर्दो हुने लागेको हुन्छ । ठूलावडाहरू त सीधै स्थानीय नर्सिङ होम वा धरान, विराटनगर र सिलगढी नै धाउँछन् । सरकारी अस्पतालको सेवा र सुविधाप्रति अविश्वास भइरहेको अवस्थामा सांसद् टुडुले आत्मविश्वासका साथ मेची अञ्चल अस्पताल नै रोजेर उदाहरण प्रस्तुत गरेका छन् ।
सांसद् टुडुका अहिलेको समेत गरेर तीन सन्तान छन् । जेठो छोरा घरमै जन्मेको थियो भने अर्की छोरी मेची अञ्चल अस्पतालमै जन्मेकी हुन् । उनले पहिल्यैदेखि सरकारी अस्पतालको उपचार सेवामा भरोसा गर्दै आएको पाइएको छ ।
झापाका सांसद् तथा मन्त्रीहरू उपचार सेवा लिनका लागि मेची अञ्चल अस्पताल आउने गरेका छैनन् । प्रधानमन्त्री केपी ओली, पूर्व गृहमन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौला, उपप्रधानमन्त्री सीपी मैनाली लगायतका नेताहरू उपचारका लागि आएको थाहा नभएको अस्पतालका एक कर्मचारी बताउँछन् । सांसद् रविन कोइराला, पूर्व सांसद् धर्मशीला चापागाइँ र पूर्व सांसद् द्रोणाचार्य क्षेत्रीलाई यस अस्पतालमा उपचारार्थ पटकपटक आएको आफुले देखेको अस्पतालका ती पुराना कर्मचारी बताउँछन् ।
अस्पतालका निमित्त मेसु डा. पिताम्वर ठाकुरले सरकारी अस्पतालले भरपर्दो र स्तरीय उपचार सेवा पुर्याउँदै आए पनि त्यसको प्रचारप्रसार हुन नसकिरहेको बताए । सांसद् टुडुले सरकारी अस्पतालप्रति दर्शाएको विश्वासले अस्पतालका सम्पूर्ण चिकित्सक र कर्मचारीको मनोवल बढेको डा. ठाकुर बताउँछन् ।